Home / Blog / Fanavaozana ny fitaratra amin'ny fandroana, ny 99% ny olona dia tsy hijery ity antsipirihany ity
2020 / 10 / 21 FisokajianaBlog 2039 0
Ho fanampin'ny kabine, koveta, fandroana ary kabinetra fandroana dia mila kojakoja maro hafa koa ny fandroana, toa ny talantalana, ny famaohana lamba famaohana ary ny fitaratra amin'ny fandroana.
Ny trano fidiovana dia faharoa amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fatoriantsika izay matetika matetika no mitsidika azy isan'andro, ao amin'ny trano fidiovana, ny andraikitry ny fitaratra amin'ny fandroana dia tsy azo hamaivanina. Ny fitaratra mazava sy mamiratra dia mety hitondra toe-po tsara rehefa miakanjo ianao. Rehefa mihatsara ny fari-piainana, ny fitaratra dia tsy vitan'ny fanasana sy ny fikorohana.
Haavon'ny fitaratra amin'ny fandroana
Ny haavon'ny fitaratra no zavatra voalohany hodinihintsika amin'ny fametrahana azy, satria tsy toy ny fitaratra anaty trano hafa, matetika isika no misafidy ny hijery ny fitaratra mitsangana ao amin'ny trano fidiovana. Ny haavon'ny fitaratra dia tokony ahitsy arakaraka ny haavon'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana, ny haavon'ny fitaratra dia tokony tazonina sahabo ho 1 metatra 3 metatra miala ny gorodona. Matetika dia aleontsika mitazona ny afovoan'ny fitaratra 160-165 cm ambonin'ny tany.
Noho ny haben'ny fitaratra isan-karazany dia matetika misy fomba dimy hanamboarana ny fitaratra: ny fanamboarana ny visy, ny fanitsiana ny fantsika, ny fanamafisana ny fatorana, ny fanerena ny tsindry ary ny fanamafisana ny fanamafisana. Ny fomba tsirairay dia samy manana ny mampiavaka azy sy ny fampiharana azy.
Tsy mila manamboatra ny haavony fotsiny isika rehefa mametraka fitaratra fandroana, fa mila mailo ihany koa ny manaraka.
Ny fitaratra fandroana dia tokony hapetraka lavitra ny fandroana na kovetabe fandroana mba hanomezana toerana malalaka hanaovana hetsika fandroana.
Koa satria ny fandroana dia miteraka rivotra mafana, azontsika atao ny mieritreritra ny fividianana fitaratra manohitra ny zavona.
Ho an'ny fandinihana manokana sy feng shui, ny fitaratra dia tokony hiatrika ny rindrina arak'izay azo atao ary tsy hiatrika ny varavarana na ny varavarankely.
Rehefa misafidy jiro ho an'ny efitrano fidiovana dia afaka mieritreritra mampiasa jiro na jiro rindrina isika. Tsy mamporisika ny fametrahana jiro ao amin'ny trano fidiovana izahay, na dia tsara tarehy aza ny jiro fa ny vokatr'ilay famonoana rano dia matetika no mahantra, amin'ny ankapobeny dia tsy ho ela alohan'ny tsy fahombiazana.
Ny fitaratra amin'ny fandroana dia tsy mora ny mametraka eo am-baravarankely amin'ny toeran'ny varavarana, hisorohana ny taratry ny fitaratra rehefa mahita zavatra ratsy ianao, miteraka fikorontanana, fikorontanana, indrindra amin'ny alina.
Tompon'ny fanavaozana maro no minia mampihena ny habaky ny efitra fandroana amin'ny fanavaozana, hanitatra ny efitrano fandraisam-bahiny na ny efitrano fandraisam-bahiny, ary avy eo amin'ny alàlan'ny taratry ny fitaratra mba hamoronana eritreritra ny habaka, amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina hanatsarana ny efitrano fandroana. Raha sendra mieritreritra toy izany ianao, dia ilaina ny manandrana misafidy loko maivana kokoa ho an'ny trano fidianao, ny loko maivana dia mety hahatonga ny fandroanao hiseho ho lehibe kokoa, raha ny loko mainty kosa dia afaka manome fahatsapana famoretana, ary ny taratry ny fitaratra dia mety vao maika mampahory, koa raha ny fandroana dia asiana fitaratra, tsara kokoa ny mifidy loko maivana kokoa ho an'ny trano fidiovana!
Ny fandroana dia misy fitaratra, ary manjelanjelatra ny jiro ao an-trano fandroana, na inona na inona volon'ilay efitrano fidiovana, dia ho maizina, avy eo ny taratry ny fandroana amin'ny alàlan'ny fitaratra, mazava ho azy fa manjavozavo sy tery kokoa ny fandroana Raha maizina ny trano fandroana, izay misy taratra, dia mazava ho azy fa manana jiro mahery ny fitaratra, avy eo ny fahasamihafana eo amin'ny hazavana sy ny maizin'ny trano fidiovana, jereo ny hazavan'ny fitaratra fitaratra fandroana dia ho mora hampahatsiaro ny olona milamina. Raha mirehitra ny jiro, dia mbola maizina be ny trano fidiovana ary mihena be ny kalitaon'ny fampiasana fitaratra. Ka tsy ampirisihina ianao hamolavola trano fandroana manjavozavo, mihevitra ny olona sasany fa manjavozavo kokoa ny manjavozavo, raha ny marina, amin'ny resaka feng shui sy fitaratra dia tsy mety.
Previous :: Leaky Faucet? Rusty? Mihisatra ve ny rano? Tanana amin'ny fomba fanamboarana azy Next: Fantatrao ve fa mampihorohoro ny fandroana "maimbo"? Mitadiava loharano mety hanamboarana azy!
Inona no hatao rehefa mividy Faucet ao an-dakozia
Tatitra momba ny fandroana trano fidiovana amerikana tamin'ny taona 2020: Toiletà Smart, Faucets Sensor, ary Bat Custom ...
Notsongain'i NASA, handeha mankamin'ny volana ireto trano fidiovana telo ireto!